Cofttek Momba anay - Famenon-tsakafo mpamatsy otrikaina
Ny sandan'ny anjara Cofttek Holding Limited
Cofttek Holding Limited hita tamin'ny taona 2008, dia orinasa biolojika ara-teknika avo lenta amin'ny fampidirana ny famokarana, ny R&D ary ny varotra. Izy io dia miorina ao amin'ny Park Park Chemical Industry Luohe, nanolo-tena tamin'ny fikarohana sy fampandrosoana ny indostrian'ny fanafody farany, manome vokatra vaovao sy serivisy avo lenta ho an'ny indostrian'ny fanafody.
Cofttek dia miaraka amina sehatra mahery vaika biolojika, teknolojia simika ary fitiliana famakafakana, mifantoka amin'ny fampandrosoana ny API, mpanelanelana ary simika faran'izay tsara, raha manome ny serivisy CRO, serivisy CMO ary ny serivisy fikarohana sy ny fikarohana momba ny kalitao ho an'ny orinasa ao amin'ny indostrian'ny biomedical.
Cofttek dia manana ekipa mpitantana efa za-draharaha sy ekipa R&D kilasy voalohany, ao anatin'izany ny manam-pahaizana miavaka maro amin'ny sehatry ny fizotran'ny fizotran'ny synthesis pharmaceutika sy ny fikarohana kalitaon'ny fanafody. Fantatra sy manan-danja amin'ny fifaninanana izy ireo amin'ny sehatry ny simia pharmaceutika, teknolojia synthetic, fampandrosoana zava-mahadomelina, bioengineering, sns. Ny mpanjifan'ny orinasa sy ny mpiara-miombon'antoka dia tonga manerana an'izao tontolo izao, mamorona fiaraha-miasa akaiky amin'ireo orinasa fivarotam-panafody maro any Amerika Avaratra, Eropa, India ary Sina.
Manantitrantitra ny fitsipiky ny "Basis kalitao, ny mpanjifa voalohany, ny serivisy marina, ny tombotsoan'ny fiaraha-mientana", ny cofttek Holding Limited. manome ny mpanjifa vokatra mahafapo amin'ny alàlan'ny fitsapana tonga lafatra sy serivisy avo lenta.
Ny fikajiana sy ny fifanarahana R&D
Famokarana kely sy vaventy lehibe
Manaova ny dingana R&D sy ny fanamboarana lalan-dàlana vaovao
orinasa biolojika ara-teknika avo lenta amin'ny fampidirana ny famokarana, ny R&D ary ny varotra.
Izahay dia manana ny laboratoara sy fitaovana mandroso indrindra, ny ekipa mpamorona R&D ambony indrindra sy ny mpiasa mpitantana.